MPANARA-MASO NY JONO AO NOSY BE : Nahatratra mpijibika dingadingana nampiasa fitaovana voarara
Mba ho fiarovana ny harena an-dranomasina eto amintsika dia voarara ny mampiasa fitaovana toy ny tavoahangina gazy, "détendeur " sy ny hafa. 8 juillet 2020
Araka ny lalàna velona eto amintsika dia tsy azo atao ny mitrandraka ny harena an-dranomasina raha mampiasa ireo fitaovana ireo, raha tsy mahazo alalana manokana ankoatra an’ireo manao fialamboly mijibika ireny.
Araka izany, arahi-maso akaiky ireo mpijibika dingadingana na “concombre de mer” amin’ireo toerana ahitana izany.
Raha ny tao Nosy Be no resahina dia niova fomba fiasa ireo mpijibika ireo any anivon-dranomasina any. Raha nampiasa vedety izy ireo teo aloha dia ireny lakana ireny no ampiasain’ireto farany izay entina hamitahana ireo tompon’ andraikitra mpanara-maso ny jono tao Nosy Be. Araka ny fantatra dia mody manjono ny sasany eo ambony lakana nefa ny hafa mijibika anaty ranomasina mampiasa ireo fitaovana voarara ireo.
Lakana miisa roa no tratran’ireo mpanara-maso, ny alatsinainy 6 jolay teo, izay nahatrarana “bouteille à gaz” miisa 30 sy “jacket” miisa 10 ary “détendeur” miisa 8 sy ireny kapa entina mijibika na “palmes” miisa 7. Tao amin’ny faritry ny ranomasina Baie Tsimipaika ao Nosy no nahatrarana izany.
Hentitra amin’ny tsy fanaran-dalàna tahaka izao ny avy amin’ny Minisiteran’ny jono, indrindra ny ekipan’ny mpanara-maso ao Nosy Be.
Raha tsiahivina dia vao herinandro vitsivitsy lasa izay no nitokanana sy nametrahana ity sampan-draharahan’ ny jono ity ao Nosy Be, izao efa nahitam-bokany izao tamin’ny fahatrarana ireo izay tsy manara-dalàna izao.
Karohina hatrany Marovoay ilay lehilahy hita nitondra farany ilay zaza RAHARAHA FAMONOANA AN’I ADRIANA (154) 4 août 2020 Mpiara-miasa akaiky amin’ny Governora miteraka resabe FARITRA ANALANJIROFO (95) 4 août 2020 Manaja ny fanapahan-kevitry ny Governora ny Depioten’i Mananjary FANESORANA OLONA AMBONY (80) 4 août 2020 Nahitana fihenana tato anatin’ny roa andro nifanesy TRANGA VAOVAO CORONAVIRUS (79) 4 août 2020 Nitsinjo ireo sahirana teny Marais Masay ny Filoha mivady FIDINANA TAMPOKA (35) 4 août 2020 Mitohy manenika ny Fokontany eto an-drenivohitra FANAMPIAN’NY FANJAKANA IREO SAHIRANA (19) 4 août 2020